डेरी व्यवसायमा विदेशी लगानी कति ठिक ? « Loktantrapost
डेरी व्यवसायमा विदेशी लगानी कति ठिक ?
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०९:४५
मानिसको खाद्य संरचना भित्र डेरी (दुध र दुधजन्य परिकार) को महत्व परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ । नेपाली समाजमा यसको धार्मिक महत्व समेत रहेको छ । स्वस्थ रहन बच्चादेखि बृद्धबृद्धा र रोगी बिरामीले समेत दुधको सेवन गर्ने गरिन्छ । मानिसले खेती गर्नु पूर्व नै पशुपालन गरेको, पशुबाट प्राप्त हुने मासु, दुधको सेवन गर्ने गरेको लामो परम्परा रहेको छ ।
नेपाली समाजमा घर–घरमा गाईभैँसी पालेर दुधको उत्पादन गर्ने, दुध र दुधका विभिन्न परिकार घरमै बनाएर प्रयोग गर्ने चलन अभैm निकै बलवान छ । पछिल्लो २०–२५ वर्षमा नेपाली समाजमा ठुलो उथलपुथल आएको छ । धेरै मानिसको गाउँबाट शहरमा बसाइँ सराइ भएको छ । धेरै ठुलो सङ्ख्यामा युवा विदेसिएका छन् । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै डेरी व्यवसाय र डेरी उद्योगमा पनि पर्ने नै भयो ।
गाउँमा मानिसले गाईभैँसी पालेर आपैmँ दुध उत्पादन गर्थे । खेतीपातीका लागि पशु पालन अनिवार्य थियो । तर, अहिले मानिसको शहरको बसाइँले गर्दा घर–घरमा गाईभैँसी पाल्ने कुरा असान्दर्भिक भएको छ । खेतीपातीमा औजार उपकरणको बढ्दो प्रयोगको कारण पशुपालन पातलिँदै गएको छ । पहिला पशुपालन निर्वाहको कुरा मात्रै थियो भने अब यो व्यवसाय बन्दै गएको छ । निर्वाहमा लागत मूल्य र उत्पादन मूल्यको हिसाव हुँदैन तर व्यवसायमा यो अनिवार्य बन्छ ।
गाउँबाट शहर बसाइँ सरेकाले पनि दुध र दुधजन्य बस्तुको सेवन गर्ने परम्परालाई सँगै लिएर शहर आएका छन् । गाउँमा दुःखले दुधको उत्पादन हँुदैछ । तर, गाउँका उत्पादकले शहरका उपभोक्तासम्म सोभैm पुर्याएर सेवा दिन असम्भव प्राय हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ विभिन्न तहका विचौलियाको जन्म भएको छ । गाउँबाट दुध सङ्कलन गरेर बजारका खुद्रा दुध व्यवसायी र घर–घरमा पुर्याएर बेच्ने र जीविका चलाउने ठुलै समुह सकृय छ । उता, शहरमा पनि फ्रिज डेरी गल्लीगल्लीमा खुलेका छन् । यस्ता डेरी र घर–घरमा पुर्याएर दुध बेच्ने समुहका कारण गुणस्तर जस्तो भए पनि शहरमा बस्नेले सहजै दुध र दुधजन्य बस्तुको सेवन गर्न पाएका छन् ।
डोकामा दुध ः भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोएर अडिदैन भनेको सुनेको थिएँ । तर, अहिले अरुले दोएको दुध पहेँला, हरिया जर्किनमा भरिएर गाउँबाट शहर आइपुग्छ र शहरमा कुच्चिएका प्लास्टिकका बोतलमा भरिएर डोको, थुन्चे र झोलामा पाँजिएर मानिसका घर–घरमा पुग्छ । यो अवस्थाले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर नगर्ने कुरै भएन । त्यसैले औषधि पसल, अस्पताल र डाक्टर थपिनु परेको छ । उता मासु, तरकारी, फलपूmल, पोकाका खानेकुरा सबैले अस्पताल थप्ने कुरालाई सघाइरहेकै छन् ।
कच्चा दुध प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकार र प्रशोधित दुध बनाउने र शहरको उपभोक्तासम्म पुर्याउने आधुनिक उद्योग खुल्न थालेको पनि धेरै भयो । तिनले बिगतमा केही ठुला शहरमा मात्र सेवा दिएको भए पनि अब यसको आवश्यकताको विस्तार तीब्र गतिमा हुँदैछ । उद्योगको आवश्यकता अनुसारको दुध सङ्कलन गर्ने गरी दुध चिस्यान केन्द्रको विस्तार पनि भइरहेको छ । शहरको दुधको माग धान्न गाउँमा व्यवसायिक गाईभैँसी पालनमा तिब्रता आएको छ । सरकारका कर्मचारीले पनि धेरथोर कमिसन लिएर किसानलाई सघाउने गरेको छ । जे होस् गाउँमा धेरथोर दुधको उत्पादन बढेको छ र त्यसले शहरको माग धानेको छ ।
सरकारले २०७५ असोजमा डेरी व्यवसायको बारेमा गोठदेखि ओठसम्मको एउटा मार्गचित्र कोरिएको निर्देशिका जारी गरेको छ । यसलाई छ महिनाको समय दिएर लागु गर्ने भनियो । लागु कसरी हुन्छ, त्यो पर्खाइको विषय भएको छ । यदि लागु भयो भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा थोरै भए पनि न्याय हुन्छ ।
दुध उत्पादक किसानदेखि सुरु भएर चिस्यान केन्द्र, उद्योग र खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्नु पर्ने नियम छ । खुला दुधको व्यापार गर्ने हजारौँ मानिसले यो नियम लागु गरेर दुध बेच्न सक्ने छैनन् । नियम नपुर्याई बेच्न नदिने नीति सरकारको हो । यदि यो नियम लागु भयो भने उद्योगले पनि अहिलेको जस्तो नाममात्रको सरसफाइ र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कतिपय डेरी उद्योगको लापरवाही स्वीकार्य हुने छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादक किसान, दुध सङ्कलन गर्ने चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन गर्ने उद्योग र बिक्री गर्ने व्यवसायी सबैले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर मात्र उपभोक्तासम्म पुग्न पाउने छन् । यसले उपभोक्तामा विश्वास बढाउछ, उपभोक्तालाई न्याय गर्छ । तर, व्यवसायीको लागत केही मात्रामा बढाउछ । लागत बढे पनि व्यवसायको दीगो विकासको आधार तयार हुन्छ भने उपभोक्ताले गुणस्तर हिन दुध र दुधजन्य परिकार पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने छैन ।
शुरुमा चल्दै गरेको चलन बदल्नु पर्ने, पाएको नाफा गुमाउनु पर्ने, लगानी बढाउनु पर्ने, उपभोक्ताले भान्सामै पाएको दुध पसलमा गएर खरिद गर्नुपर्ने जस्ता केही असहज लाग्ने भए पनि विस्तारै यो सबै व्यवस्थित बन्दै जान्छ र मानिसले नयाँ चलनलाई अपनाउने छन् । किनकि नयाँ चलनले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सबैलाई न्याय गर्छ । सबैभन्दा बढी उपभोक्तालाई न्याय गर्छ । यसको प्रभाव बिस्तारै उपभोक्ताको विश्वास बढछ । विश्वासले खपत बढछ । खपतले उत्पादन बढाउन माग गर्छ । यसरी हेर्दा अर्को ५–७ वर्षमा नेपालमा डेरीको बजार कम्तिमा पनि दोब्बरले बृद्धि हुनेछ ।
यो माग धान्न उत्पादक किसान र प्रशोधन गर्ने उद्योगले क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले सघाउनु पर्छ । यसो हुन सक्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार भेट्टाउने, धेरैले रोजगारी पाउने, सीप क्षमताको विकास हुने र सबैभन्दा महत्वको कुरा उपभोक्ताको स्वास्थमा सकारात्मक सुधार हुने हुन्छ । आम जनताको पैसा औषधि, डाक्टर र अस्पतालमा कम खर्च हुन्छ र आम्दानी बढ्छ ।
सरकारको नजिकमा भएका एकथरी मानिस यो तमाम सम्भावनालाई देखेर यो माग धान्न नेपाली व्यवसायीमा सामथ्र्य छैन । त्यसैले विदेशीलाई यो व्यवसायमा ल्याउनु पर्छ भनेर लविड. गरिरहेका छन् । खासगरी भारतीय ठुला डेरी उद्योगले यसमा चासो देखाएको अवस्था छ । उनीहरु नेपाली बजारको यो सम्भावनालाई आप्mनो पोल्टामा पार्न चाहन्छन् । यो उनीहरुको धर्म हो । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने धुनमा डेरी उद्योगमा विदेशी लगानि ल्याउन कसरत हुन थालेको छ । संसदमा पेश गर्न ऐनको मस्यौदा बन्न थालेको छ । उच्च पदस्थहरुसँग यस्ता विदेशी व्यवसायीको उठबस बाक्लिएको छ ।
गतवर्ष अलि बढी दुध उत्पादन भएको र त्यो सबै खपत नभएर किसानले दुध सडकमा पोखेको कुरालाई आधार बनाएर किसानको समस्या समाधान गर्न नेपाली डेरी उद्योगी सक्षम भएनन् भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी बजारमा गुणस्तरीय डेरीजन्य बस्तु उपलब्ध हुन सकेन पनि भन्ने गरिन्छ । केही ठुला तारे होटल र महलहरुमा विदेशबाट डेरीजन्य बस्तु आयात पनि हुने गरेका छन् ।
धुलो दुध, बटर, घिउ, चकलेट, आइक्रिम, चिज, केण्डी मिल्क, लेक्टोज आदि अहिले पनि आइरहेको छ । देशको उत्पादनलाई बढावा दिएर, उद्योगलाई सक्षम बनाएर आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यदि विदेशी लगानि डेरी व्यवसायमा ल्याउने हो भने त्यो निकै खतरनाक सावित हुनेछ । पहिला कुरा यहाँ भएका डेरी उद्योगले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पर्याप्त क्षमताको विकास गरी नसकेकाले टिक्न मुस्किल पर्छ र विदेशीको एकाधिकार बढ्दै जान्छ । राष्ट्रिय पुँजी धरासायी बन्छ । दोश्रो र महत्वपूर्ण कुरा विदेशीले यहाँ उद्योग चलाउन चाहिने कच्चा पदार्थ अर्थात दुधको आपूर्ति नेपालमा हुन नसके विदेशबाट ल्याउन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्न लगाउने छन् । अहिले राखेनन् भने पनि पछि थप्न लाउने छन् । किनकि उनीहरुलाई यहाँ उद्योग चलाएर यहाँका उपभोक्ताले तिर्ने पैसामा आप्mनो नाफाको खोजी गर्ने हो । यहाँका किसाले दुध उत्पादन गरुन् वा नगरुन् त्यससँग खासै सरोकार हुँदैन । उद्योग चलाउन जहाँ कच्चा पदार्थ सस्तो हुन्छ उनीहरु त्यहीँबाट ल्याएर चलाउने हुन् ।
भारतीय पुँजी डेरी उद्योगमा आउँदा उनीहरुले कच्चा दुध भारतबाटै ल्याउन बल गर्ने छन् किनकि नेपालमाभन्दा भारतमा दुधको उत्पादन लागत निकै न्युन छ । त्यहाँ डेरी उद्योगको लामो इतिहास छ । विधि, प्रविधि, सरकारी सहयोग आदिका कारण भारतीय किसानले नेपाली किसानले भन्दा सस्तोका कच्चा दुध उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानको दुध विभिन्न बहानामा नकिनेर वा अभाव सिर्जना गराएर उद्योग चलाउन दुध ल्याउनै पर्ने भयो अनुमति देउ भनेर भारतीय कच्चा दुध नेपाल भित्रिने छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय कच्चा दुध मात्रै होइन कतिपय प्रोडक्ट नै पनि आजको भन्दा धेरै भारतबाटै आउँछ । किनकि यताभन्दा उतै उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । यहाँको बजारमा उनीहरुको ब्राण्डले पहिचान बनाइसकेको हुन्छ । यहाँ भएको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था आउँछ ।
विशेषगरी कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा विदेशी प्रविधि, सीप र ज्ञान केही समयका लागि विशेषज्ञ ल्याएर यहीँको पुँजी उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । धेरैले रोजगारी पाउन सक्ने, सजिलै बजारमा पहुँच राख्न सकिने, उपभोक्ताको अभाव नहुने, थोरै सिकेर धेरै गर्न सकिने व्यवसाय भनेको कृषि व्यवसाय हो । कृषिमा आज हामीले धेरै गर्न सकेनौँ भनेर विदेशी लगानी ल्याउने हो भने अहिले जसले कृषिमा केही गर्ने जाँगर देखाएर लगानी, समय, सीप लगाइरहेका छन्, तिनीहरु पछि हट्न बध्य हुने छन् । अहिले केही गरौँ भन्ने उत्साह धेरै मानिसमा देखिएको छ, विशेषगरी विदेशबाट फर्किएका युवामा । हो, समस्या छन् । विचौलियाको दबदबा छ, प्रविधिको अभावमा उत्पादन लागत बढी हुने गर्छ । समस्या छ भनेर काम नै नगर्ने हो भने हामीले कहिल्यै सिक्ने छैनौँ ।
कृषि उत्पादन क्रमशः बढी रहेको छ । यसको गतिलाई अभैm बढाउनु पर्छ । बजार व्यवस्थित गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तालाई पनि न्याय गर्नुपर्छ । दुध सडकमा पोखिनु, टमाटर बाटामा मिल्काउनु, बन्दाकोपीको बारीमा डोजर लाउनु, भारतीय तरकारी बोकेका गाडी छेकिनु नराम्रो मात्रै होइन । राम्रो हुन थालेको सङ्केत पनि हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन सबै लागौँ । सानो समस्या देखिने बित्तिकै कमिसनखोरको कुरा सुन्ने र आत्तिएर विदेशी लगानीका लागि जताततै ढोका खोल्नु गल्ती हुन्छ भन्ने बुभ्mनु आवश्यक छ ।